Archive du 23-mai-2022
Marc Ravalomanana “Ampy izay ny fandeferana!”
Hanangana firenena vanona isika, tsy ekena intsony ny fahoriana mianjady amin’ny Malagasy”, hoy ny Filoha teo aloha Marc Ravalomanana nandritra ny fameloma-maso ny TIM boriborintany voalohany teny amin’ny Live Hotel ny sabotsy teo.
Vahao ireo olana
Anaty fahantrana lalina ankehitriny ny firenena. Tsy miafina intsony izany. Arakaraky ny fiovan’ny fotoana no mampitombo ihany koa ny olana sedrain’ny vahoaka malagasy sy ireo mpitondra azy eto amin’ity firenena ity.
MINISITERAN’NY RAHARAHAM-BAHINY FRANTSAY CATHERINE COLONNA NO HISOLO AN’I LE DRIAN
Tontosa ny sabotsy teo ny fifamindram-pahefana teo amin’ny minisitry ny raharaham-bahiny frantsay teo aloha, Jean Yves Le Drian sy ny vaovao, Catherine Colonna.
Andohan’Analakely Misimisy hohanina ihany ilay fandaminana vaovao
Omaly alahady 22 mey no natomboka ny andrana voalohany momba ny fiovana amin’ny fifamoivoizana etsy Andohan’Analakely.
Zava-mahadomelina Misy manaparitaka indray ny mofomamy misy rongony
Efa mihitatra mihitsy ny fomba fanaparitahan’ireo tsy mataho-tody ny zava-mahadomelina amin’izao. Malaza be indray ny space cake mofo misy rongony ka ireo mpianatra no tena kendrena hanjifa izany.
QMM - Tolagnaro Hita ny marimaritra iraisana…
Mampanahy ny fisian’ny ambadika politika amin’ny raharaha QMM izay efa am-bolana ny olana, saingy efa gidragidra vao mody nikorapaka nandefa minisitra maromaro ny Fanjakana.
Fitondrana miha malemy Hosihosen’ny olona ny fahefam-panjakana
Sesilany ireo tranga maneho fa tsy voafehy intsony ny Fanjakana. Tototry ny olana ny Fanjakana. Ny oniversite migrevy noho ny resaka ara-bola sy lalàna,
Andry Rajoelina Lasa malala-tànana amin’ny Fiangonana
Fihetsika isan’ny nanakianana an’i Marc Ravalomanana tamin’ny fotoan’androny hatramin’izao ny nanakaikezany hatrany ny Fiangonana, indrindra fa ny FJKM (Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara).
Fampiroboroboana ny fiompiana tantely Mitondra tantsoroka lehibe ny tetikasa AD2M
Tetikasa miompana amin’ny fampandrosoana ny Faritra Menabe sy Melaky ny AD2M (Appui au Développement du Menabe et du Melaky), miompana kokoa amin’ny fampandrosoana eny ambanivohitra.
Fahafatesan’i Elisabeth – Paramed Mitaky ny hivoahan’ny tena marina ireo namany
Iray volana afaka 5 andro ny nahafatesan’Itompokovavy Elisabeth, ilay tovovavy kely vao 20 taona monja mpianatra Paramed avy any Maroantsetra nandrato fianarana tany Mahajanga.
Fampisehoan’i Oboy Ora 1 sy sasany tao anaty ambiansy tanteraka
Vita hatreo aloha ny fampisehoan’ilay mpiangaly Rap Frantsay Oboy, Mihaja Ramiarinarivo izay teratany Malagasy.
Ranomasina avadika ho ranomamy Nahomby ny andrana tany Androy
Ny faran’ny herinandro teo no nanatanterahana ny andrana momba ny fikarohana namoronana fitaovana famadihana ny ranomasina na « déssalinisation »
Any amin’ny resaka fahafahana mivezivezy sy maneho hevitry ny olom-pirenena indray no hanaovana resabe hoe tsy fotoana hitetezan’ny mpanohitra faritra sy hanaovany fanakianana izao satria miasa ny fitondram-panjakana.